warqad VCI for biraha ferrous - Shiinaha Ma Anshan Baako Steel
warqad VCI for biraha ferrous
warqad VCI waayo, copper
VCI warqad crepe
warqad VCI dahaaray dhar leh tolmo wanaagsan
PE dahaarka aan dhar
VCI Anti-daxalka Paper -Eco-friendly, dhaqaale oo cusub warqad qalabka Baakadaha VCI anti-daxalka for ferrous metal- Waxaa jira laba nooc oo ah qaab-dhismeedka: warqad VCI la daahan PE (PA) iyo iyada oo aan PE (PO). Alaabta Tani waxaa lagu horumariyaa gaar ahaan steel carbon iyo birta ah ee kabka. wax soo saarka PO dib loo isticmaali karo 100% iyo sida loo isticmaalo ee kala lakab oo qaybo bir ah. wax soo saarka PA siin karaan hawlaha biyaha iyo greaseproof, sidaas darteed waxaa laga codsadaa wax Baakadaha dibadda iyo sidoo kale. p aan awoodno ...
Tirada Min.Order: 100-500 Boqorradii
Supply Kartida: 2,000 metrik per Month
VCI Anti-daxalka Paper
qalabka Baakadaha anti-daxalka -Eco-friendly, dhaqaale oo cusub
warqad VCI for biraha ferrous: - Waxaa jira laba nooc oo ah qaab-dhismeedka: warqad VCI la daahan PE (PA) iyo iyada oo aan PE (PO). Alaabta Tani horumarsan gaar ahaan steel carbon iyo birta ah ee kabka. Wax soo saarka PO dib loo isticmaali karo 100% oo loo adeegsaday kala layers of qaybo bir ah. Wax soo saarka PA siin karaan hawlaha biyaha iyo greaseproof, sidaas darteed waxaa laga codsadaa wax Baakadaha dibadda iyo sidoo kale. Waxaan daabacan kartaa logo warqad VCI.
MPTE Wargeysyada VCI gabi ahaanba bedeli baahida loo qabo habab ilaalinta daxalka caadi ah sida dufan iyo saliid tago biraha ku hadhay oo lacag la'aan ah oo diyaar u ah inay u isticmaalaan. qaybaha Your, mishiinada iyo qaybo bir ah pre-been abuur ah steel carbon iyo kabka-birta wuxuu noqon karaa si fudud oo qiimaha wax ku ool ah ku duudduubay iyo daxalka free.
characters caadiga ah ee warqad VCI:
◆ hawlaha Double of inhibitor daxalka uumiga iyo xiriir inhibitor daxalka
◆ ma u baahan tahay saliid antirust jubbadda, shaqeeyaan wax ku ool ah, keydinta shaqada.
◆ dhismeedka Alternative, isagoo xoogga kala duwan
◆ ilaalinta-waqtiga dheer ee alaabta birta ah, iyo birta.
◆ Ilaalinta biraha ka daxalka inta lagu guda jiro gaadiidka
◆ kaydinta Ku-meelgaarka ah ee qaybo ka mid macdan ah oo u dhexeeya heerarka kala duwan ee wax soo saarka
◆ Sida interleaves ama duubo shakhsiga ah ee qaybo ka mid
◆ Si loo kordhiyo wareegga nolosha wax soo saarka qaybaha macdan iyo mishiinada
◆ Si bay'adda iyo kharash-ool ah
◆ Directives shirka iyo heerarka JIS Z 1535, QB1319-2010, TRGS 615, ROHS, iwm
MPTE ee uumi ah daxalka inhibitor VCI Waraaqaha waxa laga heli karaa in tiro balaadhan oo ah fursadaha si ay uga caawiyaan la kulmaan baahida:
sheet Flat, Laabidda sida ay doorashada size
Kordhiin, versions creped, xoojiyeen ama dahaaray, polyetylen (PE) dahaarka
miisaanno kala duwan (50 - 280g / m2)
Qolfaha, interleaves, qobays waayo bacaha
xal gaar ah sida looxyada, saxanno VCI, iwm Customer
warqad Wax iyo warqad kale oo caqabad gaar ah mariyaa si loo siiyo badbaado weyn.
Sida laga soo xigtay xoog iyo qaab-dhismeedka ka mid ah maaddooyinka baakooyinka, oo ay ku jiraan:
VCI // warqad Kraft dhexdhexaad Flat
pack biyuhu Guud
VCI // warqad Kraft dhexdhexaad Flat // PE film
pack biyuhu culus
VCI // warqad Kraft dhexdhexaad Flat // PE film // PE dhar
VCI // warqad Kraft dhexdhexaad Flat // film PE // PE-xidhkii // PE film
VCI // crepe warqad Kraft dhexdhexaad ah
VCI // crepe warqad Kraft dhexdhexaad // PE film
VCI // crepe warqad Kraft dhexdhexaad // PE film // PE dhar
A dvantages of MPTE Wargeysyada uumi ah daxalka Inhibitors VCI:
kaydka Kharashka shirkadda aad
daxalka lagu kalsoon yahay ilaalinta dheer lacag la'aan ah oo dheer tiro balaadhan oo ah waxyaabaha aad
No deegaanka, halis caafimaad ama ammaanka
codsiyada Simple iyo ammaan
Lagu kalsoonaan karo oo dhakhso ah talooyin farsamo ka koox farsamo MPTE ee, wada jir ah ula tiro balaadhan oo ah soo saarka iyo fursadaha si wax looga qabto baahida gaarka ah
Approved by saarayaasha caalamka ee steel-qaadashada, aluminium, suuqa baabuurta
Previous: warqad VCI waayo, copper
Next: warqad VCI for Multi-birta
Sidee ma Vci Paper Work
Sidee Vci Paper Works
Steel duubaya Paper
Vci Paper Qeexid
VCI Paper dhoofinta
Vci Paper Sida ay u shaqayn
Vci Waraaqaha Rolls
VCI miridhku ku-CADDAYN Kraft WARQADDA
Waa Maxay Vci Paper
PE warqad crepe dahaarka
warqad crepe dahaaray film VCI
VCI PP film laalaab-xidhkii
warqad VCI for Multi-birta